Gunyana 21, 2020
Vamwe varairidzi vezvikwata zvenhabvu yepamusoro yePremier Soccer League vanoti vakagadzirira kudzoka kwemitambo zvekuti vatononokerwa nekutanga kwayo.
Varairidzi vakawanda vanoti gadziriro yemwaka uno haina kumira pakambomiswa mitambo nehurumende asi kuti yakaenderera mberi vachitevedza mitemo yaive yadzikwa yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid 19.
Murairidzi weTriangle Taurai Mangwiro anoti vakaita gadziriro yavo kare achiwedzera kuti, iye nevatambi vake, vakangomirira kuratidza veruzhinji zvavakapakata mwaka uno.
Murairidzi weHerentals Kumbirai Mutiwekuziva anoti sevanhu venhabvu vanokwanisa kupinda munhandare chero zuva kana nguva kukwikwidza zvakasimba kutora mukombe.
Mutiwekuziva anoti kunyange hazvo vaita zvekubatwa pahuro pakudzoka kwemitambo, vari kufara nazvo sezvo iriiyo raramo yevatambi, nevamwewo vanoita zvenhabvu.
Nhabvu munyika yakapedzisira kutambwa muna Mbudzi gore rapera ikazomiswa nehurumende muna Kurume apo yaifanira kudzoka kuchityirwa kupararira kwechirwere cheCovid 19.
Asi hurumende neveZifa ava vakabvumirana kuti mitambo idzoke kana Zifa ikakwanisa chete kubuda nehurongwa hwemitambo hunofadza hurumende yacho uyezve hunodzivirira kupararira kweCovid 19.
Izvi zvirikufadza aimbotambira Dynamos nemaWarriors Stanley Chirambadare uyo anoti mitambo iyi ichabatsira Zimbabwe kusarudza chikwata chenyika che makundano eChan achaitwa munaNdira.
Murairidzi weBlack Rhinos Hebert Marowa anoti havasi kumbotarisa zvezororo rakareba reCovid 19 yanga iripo asi kumitambo yavari kutarisira kutanga chero nguva.
Nesbert Saruchera uyo akapinza Cranborne Bullets muPSL anoti semasoja vakagadzirira hondo munhandare chero painenge yangotanga. Cranborne Bullets pamwe neTenax, Hwahwa neBulawayo City dziri kupinda muPSL parikutanga mitambo.
Caps United neDynamos ndizvo zvikwata zvvakatenga vatambi vakawandisa panguva yezororo asi varairidzi vavo Darlington Dodo naTonderai Ndiraya havana kubatika kuti tinzwe kuti varikuronga zvipi.
Mwaka wapera, mukombe wakatorwa neFC Platinum iyo yakapedza iri pamusoro peChicken Inn neCaps United.
Muteveri wemutambo wenhabvu VaTinashe Museti vanoti semaonero avo, FC Platinum neNgezi Platinum Stars ndidzo dzicharwira mukombe kana nhabvu ikadzoka. Chikwata chinotora mukombe weligi chinobudirira kumirira nyika mumakwikwi eCaf Champions League.